Waa Sidee Dakhliga Xashiishka Sida Kanada? • Dawooyinka Inc.eu
Maaddaama xilliga dakhligu sii kordhayo, falanqeeyayaasha ayaa si dhow ula socda lambarrada ay soo sheegeen qaar ka mid ah shirkadaha ugu caansan xashiishadda. Filashooyinka ayaa ahaa kuwo aad u sarreeya, laakiin qaar ka mid ah soo saarayaasha xashiishka waaweyn ayaa ku guuldareystay inay ka soo baxaan filashooyinkan. Hoos ka akhriso warbixinnada qaarkood.
Aphria, Inc. (APHA.TO) (APHA) waxay ka mid ahayd wax soo saarayaashii ugu horreeyay ee Canadianka ah ee soo bandhiga dhaqaale la daabacay natiijooyinka seddexdii biloodba mar. Intii lagu gudajiray wicitaankii shirkii, kooxda maaraynta waxay iftiimisay halista cadaadiska sicirka ee Kanada iyadoo faallooyinkaan ay culeys dheeri ah saareen cida soosaarta xashiishadda Kanada
Shaxda ururada Holdings Inc. (OGI.TO) (OGI) wuu hooseeyay kadib markii uu ka warbixiyay natiijooyinka maaliyadeed ee seddexdii biloodba mar taasoo ka gaabisay rajadii laga qabay. Tani waxay timid ka dib markii soo saaraha Cannabis-ka Canadian-ka ah uu helay $ 171 milyan oo maalgashi shirkadda British American Tobacco (BTI).
Kordhinta dakhliga xashiishadda Auxly Cannabis Group
Horaantii todobaadkan, Auxly Cannabis Group Inc. (XLY.V) (CBWTF) natiijooyinka maaliyadeed ee rubuca afaraad iyo sanadka buuxa iyo suuqa ayaa ka jawaabey lambarada. Intii lagu guda jiray rubucii, shirkadda Canadian Cannabis waxay soo warisay inay soo saareyso $ 18,3 milyan oo dakhli xashiishad ah. Marka loo barbardhigo isla muddadaas sanadkii la soo dhaafay, wareejinta ayaa si aad ah kor ugu kacday. Waxaan u nisbeynaynaa kobaca ganacsiga Auxly ee xashiishadda 2.0.
In 2020, Auxly wuxuu abuuray in ka badan $ 50 milyan oo dakhli ah ($ 46,6 milyan dakhliga xashiishadda saafiga ah). Marka loo barbardhigo 2019, dakhliyada ayaa kordhay in kabadan 500%. Qaybaha isbarbar dhiga ee sanadka 2019 waxay leeyihiin bar hoose mana la yaabno guusha Auxly. Sanadkii la soo dhaafey, Auxly wuxuu si weyn u xoojiyey miisaaniyaddeeda tanina waa horumar muhiim ah. Shirkaddu waxay ku guuleysatay tan iyada oo loo marayo koror taxane ah.
Akhri wax dheeraad ah farsamo420.com (Source, EN)
Canadacannabiskaydka xashiishkamaaliyad ahaan
Haddii ay xukuumaddu ka mamnuucdo, dadku waxay daryeeshaan qalabkooda (khayraadka)
Dhammaantiin waad salaaman tihiin, aan is baro? Magacaygu waa Kees waxaanan ahay maamulaha webka qaar ...
Tilray Inc. ayaa ka warbixiyay natiijooyinka sanad maaliyadeedka 2021 iyo natiijooyinka rubuca afaraad. Lacagta saafiga ah…